China I Refinecolor Latte Art Maker China Manufacturers & Suppliers & Factory
 Ifoni：86-0755-28307302 I-imeyili：refinecolor015@refinecolor.com
Uhlobo lwebhizinisi:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Organization
Ngaphandle:51% - 60%
Izikweletu:ISO9001, CE, FCC, RoHS, Test Report, GB, ISO/TS16949
Iphrinta ye-UV >
Ifoni yephrinta yefoni
Iphrinta ye-USB Flash Disk
Iphrinta ye-UV ephepheni
Iphrinta ye-Power Bank
Iphrinta ye-Foam Foam
Iphrinta ye-Digital >
I-T Shirt Printer
Iphrinta yokudla >
I-Selfie Coffee Printer
I Refinecolor Latte Art Maker - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I Refinecolor Latte Art Maker)
Umshini we-Word Art we-Tshirt Printer
Ukupakisha: Case Wooden
Amandla Wokunikezela: 300 set/month
I-Word Art Isitifiketi se-Tshirt t shirt. Izambatho Ekhanyayo Nezimnyama (inkinobho emhlophe). Imibala eqondile nokumelana nokugeza, izesekeli ezisekele ngokuphelele nezinxenye ezinikezwe ndawonye. I-axis yekhwalithi ephakeme yekhwalithi yokunyathelisa okunembile. I-Art Word T Shirt Printer yenziwe nge-Stylus photo Ep...
I-Refinecolor Technology ikhofi ye-encry edible ingi
Ukupakisha: ngaphandle kwekhadini lezinkuni
Amandla Wokunikezela: 150 piece per week
Uhlelo oluzoguqula indlela yokuphuza kanye nemikhiqizo yokudla edlalwayo ethulwe futhi iyajabula. Isistimu yokudlulisa ngekhanda lokuphrinta elihambayo ukugwema ukugaya ukudla nokugwema ukudla akukwazi ukulungiswa esiteji uma kuqhathaniswa ngesistimu yokudlulisa nge-platform. Kungagwema isithombe sokunyathelisa...
Refinecolor Ripples selfie ikhofi iphrinta
Amakhukhi Bisuit Printer akwazi ukunyathelisa kunoma iyiphi indawo kuze kufike ku-11cm x 11cm futhi kufike ku-180 mm ukuphakama. Ikuvumela ukuba udale izimpawu ezidakayo ezitholakalayo noma izithombe ngqo emkhathini ngokushesha ngaphandle kwesidingo sokuthi noma yiliphi ishidi lokudlulisa nhlobo. Cabanga Ukukwazi...
I-Refinecolor ubuchwepheshe be-coffin edible inkinobho yamakhokhi wephrinta
Lokhu kuyi- printer eyaziwayo engcono kakhulu yokuthenga ngokusekelwe enkulumweni esemthethweni yalokho okushicilelwe kakhulu okushicilelwe ukhiqiza uk (ngenxa yenqubo esetshenziselwa ukwakha isithombe), kodwa kusengakapheli ubuciko kimi. Indlela esebenza ngayo ilula. Uvele ulayishe isithombe iphrinta yekhofi efonini...
Iphrinta ikhofi yephrinta ye-refinecolor
I-Chromacake Australia - I-First Direct eya ku-Food Commercial Grade Yokushicilela Uhlelo oluzoguqula indlela yokuphuza nokudla imikhiqizo yokudla inikezwa futhi iyajabula. Izoba nomphumela ovelele wokubukwa ngaphambi kokunambitha ukudla okumnandi ukugcina umzuzu omuhle nenjabulo. Isithombe singakwazi ukuvela ku-100%...
I-Refinecolor Ikhomishini yekhofi edlayo
Izoba nomphumela ovelele wokubukwa ngaphambi kokunambitha ukudla okumnandi ukugcina umzuzu omuhle nenjabulo. Isithombe singakwazi ukuvela ku-100% phezu kokudla. Umkhiqizo wezobuchwepheshe unikeze ukudla okungokwesiko kunambitheka okujulile nencazelo, vumela impilo yakho ibe nembala. Sithanda ukwethula iphrinta...
I-Refinecolor Technology yakha iphrinta yekhofi
Cabanga Ukukwazi Ukuphrinta Izithombe Zemibala Egcwele Ngokuqondile ku-Coffee, Amakhekhe, Amakhukhi, Ama-Macarons, Isinkwa & Okuningi emasekhondini ambalwa ne-Photo ephelele ngokuphephile ukuyisebenzisa! Sithanda ukwethula iphrinta ye-ChromaPrint Food Distributed by I-Chromacake Australia - I-First Direct eya...
Refinecolor macaron okushicilelwa template pdf
Cabanga Ukukwazi Ukuphrinta Izithombe Zemibala Egcwele Ngokuqondile ku-Coffee, Amakhekhe, Amakhukhi, Ama-Macarons, Isinkwa & Okuningi emasekhondini ambalwa nge-Photo being Ngokuphephile Ngokuphelele Ukudla! Isetshenziselwa ububanzi bezinsimu zokudla, ingaphrinta ikhofi ye-foam, ikhekhe, ibhisikidi, isinkwa,...
I-Refinecolor A4 szie I-Cake Printer 3d
I-Refinecolor cake i-printer amazon amazon
Isetshenziselwa ububanzi bezinsimu zokudla, ingaphrinta ikhofi ye-foam, ikhekhe, ibhisikidi, isinkwa, ushokoledi, ama-candies, ama-milkshakes, i-ayisikhilimu njll, nje uthathe imizuzu engaphansi kwemizuzu ungaphethelela ikhofi yekhofi engu-6, isivinini sokunyathelisa esheshayo Lokhu kuyi- cake printer i-amazon...
I-Refinecolor Macaron Maker Pinterest
Sithanda ukwethula i-ChromaPrint Food Printer eyanikezwa yi-Chromacake Australia - I-First Direct eya ku-Food Commercial Grade Printing Uhlelo oluzoguqula indlela yokuphuza kanye nemikhiqizo yokudla edlalwayo ethulwe futhi iyajabula. It uzoba gqamisa visual effects phambi ukunambitheka ukudla okumnandi ukugcina...
I-Refinecolor i-selfie ikhofi ye-singapore yentengo
It uzoba gqamisa visual effects phambi ukunambitheka ukudla okumnandi ukugcina okwamanje enhle nenjabulo. Isithombe kungaba 100% sivele phezu kokudla. Umkhiqizo wezobuchwepheshe unikeze ukudla okungokwesiko kunambitheka okujulile nencazelo, vumela impilo yakho ibe nembala. i-singapore ye-selfie ikhofi iyakwazi...
I-Refinecolor edible e-macaron printer
Izoba nomphumela ovelele wokubukwa ngaphambi kokunambitha ukudla okumnandi ukugcina umzuzu omuhle nenjabulo. Isithombe singakwazi ukuvela ku-100% phezu kokudla. Umkhiqizo wezobuchwepheshe unikeze ukudla okungokwesiko kunambitheka okujulile nencazelo, vumela impilo yakho ibe nembala. i-singapore ye-selfie ikhofi...
Refinecolor ikhofi selfie / macaron / umshini ikhekhe
It uzoba gqamisa visual effects phambi ukunambitheka ukudla okumnandi ukugcina okwamanje enhle nenjabulo. Isithombe kungaba 100% sivele phezu kokudla. Umkhiqizo wezobuchwepheshe unikeze ukudla okungokwesiko kunambitheka okujulile nencazelo, vumela impilo yakho ibe nembala. I-Cake Printer Sg iyakwazi ukuphrinta kunoma...
I-Refinecolor Ripple Selfie Coffee
Amandla Wokunikezela: 100 piece per week
I-refinecolor intambo yomshini wokukhiqiza umshini
Ngeshwa, ngaphandle uma uhlala eTaiwan, wunqoba`ukukwazi ukuzibonelela lokhu. Okwamanje, lawa maphrinta ekhofi okudala kuphela ku-Let`s Coffee chain ye-vending kiosks ngaphakathi kwezitolo ezikahle zeTai`s Family Mart. Bakhuphuka nalo mbono ukubasiza bakhangele amakhasimende amaningi futhi ancintisane nezindawo...
I-refinecolor ikhofi ye-foam yomenzi we-foam
Ukulinganisa ngo-18kg nje kuphela, lo mshini omangalisayo usebenzisa ubuchwepheshe benkinobho obungakapheli obungakwazi ukuphrinta phezu kwezinto ezihlukahlukene ezidliwayo ngemizuzwana engaba ngu-20! Ngikwazi ukubona lolu hlobo lwezinto ezisetshenziselwa zonke izinhlobo zezinhloso. Izinketho azipheli. Isibonelo, uma...
Iphrinta ye-app ye-Refinecolor latte yobuciko
Ngikwazi ukubona lolu hlobo lwezinto ezisetshenziselwa zonke izinhlobo zezinhloso. Izinketho azipheli. Isibonelo, uma unomhlangano ekuseni ehhovisi lakho, ungathola ikhofi ikhofi kumuntu ngamunye nge logo yakho yenkampani kuso noma igama elikhuthazayo. Uma ushada, nawe angathola ikhofi yomuntu oyedwa kumuntu ngamunye...
I-refinecolor ikhofi yephrinta isithombe dgt
Iphrinta ye-canon engcono kakhulu yezithombe ezidliwayo zisebenzisa i-edible edayiwe yenzelwe iphrinta yekhaya nokuthenga ngekhanda lokuphrinta kwezomnotho, kuwukuthi okwenzelwe amakhasimende ezingeni lokungena nezitolo zekhofi. Ukusebenza okulula, isivinini esiphakeme sokuphrinta 20second indebe ngayinye. Izindleko...
Umshini womenzi we-latte 3d
Thola ubuciko ngomshini we-latte we-india yasekhaya - kukhona okuthile kuwo wonke umuntu nakwa njalo. Dala ukuxhumana okujabulisayo phakathi kwabangane on night game noma usizo imibhangqwana aphule ice ngobusuku busuku. Amathuba angapheli. Amakhasimende akho azothola ukukhishwa kwe-Ripples uma bebona u-selfies wabo,...
I-Refinecolor vumela i-cafe latte iphrinta
Ukuheha Amakhasimende Amasha Hlala phambili komncintiswano ngokufaka emisha emisha eheha ezintsha futhi Kungakhathaliseki ukuthi abalandeli bezemidlalo bayabuka umdlalo noma abasebenzisana nabo beyibamba elide emva komsebenzi - wakho amakhasimende athande ukwabelana ngezikhathi ezinhle. Banike umbono obonakalayo futhi...
umshini wokwenza ikhofi we-latte
Nge-self yethu uhlelo lokusebenza lwe-ripple ungaphrinta kwikhofi uphinde uphendule iphrinta yakho yeBiscuit , ukushaywa ubisi, amabhisikidi, ama-pastries, ama-macaroons & nezinto eziningi kakhulu ekuhlangenwe nakho okungavamile. Yenza i-owm yakho design, isithombe, i-Emoji, Imilayezo kukhofi yakho oyintandokazi,...
Iphrinta yokuphrinta ye-latte foam
Ufuna izindlela ezintsha ukuze uthole amakhasimende akho ayala ukuthi nxazonke ezengeziwe? Bakhonze ubhiya nge-Ripples! Babamangalisa ngemifanekiso yokudala, ama-logos ashicilelwe futhi afakwe ngokwezifiso izingcaphuno, ngokuqondile phezulu kwebhiya yabo.Ngeza imali engenayo Kungakhathaliseki ukuthi usuku lokuzalwa...
I-latte yobuciko bemishini yokunyathelisa ikhekhe
Amakhasimende akho azothola ukukhishwa kwe-Ripples uma bebona u-selfies wabo, izingcaphuno ezizithandayo, noma imilayezo ekhethekile nezithombe eziphuzweni zabo. Kungakhathaliseki ukuthi usuku lokuzalwa olujabulisayo noma Ngiyakuthanda, amakhasimende angakha imiklamo yawo siqu ngokwabo kanye nabangane bawo ngephrinta...
Iphrinta ephrinti ye-A4 UV
I-A3 flatbed uv golf ball iphrinta
I-Power Bank ye-Laptop ne-Printer
Iphrinta ye-Epson XP600 UV
ukulungisa kabusha i-laptop kanye netafula lekhofi lephrinta
I-Digital Shoes Printer Yokuphrinta Imishini
Ukuthengiswa kwephrinta ye-Flatbed Digital
Iphrinta ye-A1 UV esebenzayo
Iphrinta ye-Power Bank Online
I-Colors ye-Inkjet ye-Cotton Bag Printer
I-A3 I-T-Shirt engabizi ye-Shrinta
Iphrinta ye-UV yedijithali
Iphrinta ye-UV iphrinta ifomethi encane
Iphrinta ye-UV ephathekayo e-USA
umshini wekhekhe we-selfie ikhofi
Umshini Wokuprinta Ngokuqondile we-Cap Cap
I-Oem Ngokuqondile Emigqokweni Yezinhlamvu Zephrinta
I-A1 A2 A3 Indwangu Yokugqoka I-Tshirt Printer
I Refinecolor Latte Art Maker I-Refinecolor Latte Art Maker I-3d i-Latte Art Maker I-Coffee Latte Maker I-Refinecolor Jet UV iphrinta I-Latte Art Face I-Coffee Latte Art I-Latte Art Printer
Copyright © 2020 Shenzhen Refinecolor Technology Co., LTD. Wonke amalungelo agodliwe.